Abakhiqizi Bomswakama Abakhangisi Abakhulu Abenziwe Ngobungcweti
IRayson Spring Mattress Manufacturer isungule futhi yathuthukisa uhlelo lokuqinisekisa ikhwalithi olubeka izinkomba zokusebenza komkhiqizo phambili embonini.
I-Rayson Global Co., Ltd ibhizinisi elihlanganyelwe le-Sino-US, elisungulwe ngo-2007 eliseShishan Town, eFoshan High-Tec
Amakhasimende afuna ukwazi kabanzi ngomkhiqizo wethu omusha noma inkampani yethu, vele uxhumane nathi. Kuyo yonke inqubo, ochwepheshe bethu be-QC bazobheka inqubo ngayinye ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo. Kuze kube manje, uRayson udlulise isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba jikelele. Yonke imikhiqizo kubandakanya umkhiqizo wethu omusha inikezwa nge-design entsha, ikhwalithi eqinisekisiwe, namanani entengo wokuncintisana.
Ungangisiza ukuthi ngizenzele noma ngisebenzise i-logo yami kumkhiqizo? Singenza umatilasi ngokusho komklamo wakho noma sinikeze insizakalo ye-OEM sidinga nje ukuthi usinikeze umkhiqizo wakho wobuciko noma izithombe zelogo. 1.Beka ibhokisi phezu kwendawo eyisicaba egumbini lakho lokulala, donsela umatilasi ngokucophelela bese ubeka embhedeni wakho. 2. Sika ngokucophelela isikhwama sangaphandle ngesikele uqiniseke ukuthi awusiki ipulasitiki embi ngaphakathi noma kumatilasi, ungammangaleli ummese 3. Khipha umatilasi ovaliwe ongenalutho ungene embhedeni wakho 4. Sika ngokucophelela isikhwama sepulasitiki eceleni kwewashi njengoba umatilasi eqala ukucindezela ngokushesha, Susa isikhwama sepulasitiki. 5.Vumela amahora angama-24 ukuthi omatilasi bakho abasha banwebe ngokuphelele.Mina ngivakashela imboni yakho Yebo, wamukelekile ukuvakashela imboni yethu nganoma yisiphi isikhathi, siseduze nesikhumulo sezindiza saseGuangzhou Baiyun, kungathatha ihora elilodwa ngemoto, futhi singahlela imoto ukukuthatha.